Iindaba -Iintlanganiso zesishwankathelo sexesha eliphakathi leShandong Zhihua Pipe Industry / iHuabao Machinery Lean Promotion Project ibibanjwe ngempumelelo
Nge-28 kaJulayi ka-2020, intlanganiso yesishwankathelo sexesha eliphakathi lesigaba sokuqala seProjekthi yokuNyusa yeLean yoShishino lwePayipi yeZhihua / oomatshini baseHuabao yabanjwa ngempumelelo. UZhang Wei, umphathi jikelele weZhihua Pipe Industry / Huabao Machinery, kunye nabaphathi benkampani kuwo onke amanqanaba, uMcebisi weProjekthi weShandong Huazhi Iqela lithathe inxaxheba kule ntlanganiso.
Le ntlanganiso ishwankathele impumelelo, ukusilela kunye namanyathelo alandelayo okuphakanyiswa okuthe tye ngo-2020, kwaye yaveza umkhombandlela wenkqubela phambili egudileyo yokunyusa okuthe tyaba kwisiqingatha sesibini sonyaka. Abasebenzi kuwo onke amanqanaba bakwavakalisile ukuzimisela kwabo ekusebenzeni bodwa kwaye balwela ukugqwesa.
Ukuya kuthi ga kwisiqingatha sonyaka sonyuselo olungqongqo, umxholo othile wolawulo uguqulwe ukusuka kwinto ethile wayiswa kwinto ethile. Ukuqonda kunye nesimo sengqondo sabasebenzi sitshintsha ngokuthe ngcembe, kwaye imisebenzi yolawulo ihlala ibekwa emgangathweni.
Ngokusekwe kubume bangaphandle kunye nelona nqanaba lophuhliso lweshishini, isicwangciso sohlengahlengiso sexesha eliphakathi nelide senziwe, sibeka isiseko esihle somsebenzi wenkqubo elandelayo.
Ukuseka inkqubo yolawulo lwentlanganiso yenkampani, ukubeka emgangathweni imigangatho yolawulo lwentlanganiso kuwo onke amanqanaba, kunye nokuqinisekisa ukusebenza kwesakhiwo seentlanganiso zenkampani.
Imigangatho yokuvavanywa kokusebenza kunye nezikim zovavanyo sele zimiselwe zaza ngokuthe ngcembe zasetyenziswa kuvavanyo lweziphumo. Ukuziqhelanisa nokukhuthaza sele kumiselwe kwaye isiphumo siqala ukuvela.
Ngolawulo lwenkqubo kunye nesiphumo sokutsala, uvavanyo lokuhambelana kweeakhawunti lubandakanyiwe kulawulo oluqhelekileyo, kwaye ubume bempahla buye benziwa bungqinwa ngokuthe ngcembe bukhonza umbutho wemveliso kunye nokuhanjiswa kwenkqubo.
Ukukhuthazwa okusebenzayo kwemodeli yomzekelo kubonelela ngendlela ecacileyo nesebenzayo yokuphuculwa kolawulo lwesiza semveliso.
Inkqubo yolawulo locwangco lwaphakathi evekini sele ivuliwe, enokunika isikhokelo kunye nesikhokelo esisebenzayo kunye nesiqinisekiso sayo yonke inkqubo yemveliso, kwaye yenze umsebenzi omiselweyo wokucwangciswa ngokusetyenziswa kwenkqubo.